Mid ka mid ah Ururada Warbaahineed ee dalka oo ka digay caburinta saxaafada xorta ah – Puntland Voice
August 14, 2014 10:53 am Views: 27
G/xigeenka Dalladda Warbaahinta Madaxa Bannaan ee SIMHA, Ismaaciil Sheekh Khaliif ayaa sheegay inay tahay arrin laga xumaado hadalkii uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sheegay inay 90% Warbaahinta Madaxa Bannaan jaal la yihiin Alshabaab.
Ismaaciil Sheekh Mukhtaar oo caawa Wareysi Khaas ah siiyey Dalsan Radio ayaa carrabka ku dhuftay inay Warbaahinnadda Madaxa Bannaan yihiin kuwo aan haba yaraatee wehel iyo jaal u ah dhinacyadda isku haya Siyaasadda Somalia.
Waxa uu si gaar ah u naqdiyey hadalka Madaxweynaha ku eedeeyey Warbaahinnadda Madaxa Bannaan inay yihiin kuwo u adeega Alshabaab, wuxuuna xusay inay Warbaahinnadda ka madaxa bannaan yihiin Siyaasadaha is-diidan ee dalka ka jira.
“Idaacadaha iyo Telefishinnadda Madaxa Bannaan ma aha kuwo ku hadla Codka Dowladda ama Cod Alshabaab, waxayna Warbaahinnadu leeyihiin Siyaasad u gaar ah oo ay ku kala xulanayaa Wararka ay Dhegeystayaasha u baahinayaan” ayuu yiri G/Xigeenka SIMHA oo intaasiku daray inay Warbaahinnadda Madaxa Bannaan 90% ka shaqeeyaan Nabadda iyo Horumarka Bulshadda.
G/xigeenka Dalladda Warbaahinta Madaxa Bannaan ee SIMHA, Ismaaciil Sheekh Khaliif waxa uu tilmaamay inay SIMHA cambaaraynayso hadalka Madaxweynaha ku sheegay inay Warbaahinnadda Madaxa Bannaan u xagliyaan ama u shaqeeyaan Alshabaab.
“Waa arrin aan Madaxweynaha laga filaynin arrintaasi, waxaana ka codsanaynaa inuu ka laabto Aragtidaasi” ayuu yiri Mas’uulkaasi oo Madaxweynaha xusuusiyey inay Warbaahinnadda Madaxa Bannaan ahaayeen kuwii la garab galay inuu ku guuleysto Ololihiisa Musharaxnimadda Madaxtinimadda.
Waxa uu intaasi ku daray inay ayaan-darro tahay haddii uu Madaxweynuhu shalay jaal la ahaa, kuna dhex jiray Warbaahinta inuu maanta Warbaahinnadda ku tilmaamo kuwo 90% Alshabaab u adeegayo.
G/xigeenka Dalladda Warbaahinta Madaxa Bannaan ee SIMHA, Ismaaciil Sheekh Khaliif waxaa wax laga weydiiyey haddii ay Warbaahinadda Madaxa Bannaan joojinayaan Wararka Alshabaab, waxa uu tilmaamay inaysan joojin karin Dheelitirka Wararka labada dhinac, wuxuuna ku celceliyey inaysan Waraahinnaddu ahayn kuwo ku hadla Codka Dowladda ama Codka Alshabaab.
Si kastaba ha ahaatee, Wareysigii uu Madaxweynaha Dowladda Federalka siiyey Telefishinka BPS ee laga leeyahay dalka Maraykanka ee ka muuqatay colaadinta Saxaafadda, waxay muujinaysaa inay Dowladda Federalka mar kale doonayso in Saxaafadda la caburiyo, la xiro ama Suxufiyiinta lagu tacadiyo sidii horey u dhici jirtey.
Dalladda Suxufiyiinta Madaxa Bannaan ee Soomaaliyeed waa Dallad Warbaahineed oo ay ku mideysan yihiin Suxufiyiin iyo Xaruumo Warbaahineed oo ku yaalla magaalladda Muqdisho iyo inta badan Goballadda Somalia, waana Warbaahin ka madax bannaan dhinacyadda isku haya Siyaasadda Somalia.
SIMHA waxay u taagan tahay in la dhowro Xorriyadda Hadalka iyo Xuquuqda Suxufiyiinta iyo Saxaafadda, waxayna ka soo horjeedaan fal kasta oo lagu cabsi gelinayo, laguna caburinayo Xirfadleyda Warbaahinta Somalia oo iyagu horey loogu tacadiyey.